"PSG Waa Koox FASHILANTAY, Sababatoo Ah...." - Jose Mourinho Oo Dhulka La Dhacay PSG & Tusaalooyinka Uu Usoo Qaatay - Gool24.Net
“PSG Waa Koox FASHILANTAY, Sababatoo Ah….” – Jose Mourinho Oo Dhulka La Dhacay PSG & Tusaalooyinka Uu Usoo Qaatay
Tababaraha reer Portugal ee Jose Mourinho ayaa koox fashilantay oo guul-darraysatay ku tilmaamay Paris Saint-Germain, waxaanu canaantiisa ku sababeeyey xiddigaha waaweyn ee ay haysteen iyo sida aanay illaa hadda awood ugu yeelanin inay ku guuleystaan tartanka Champions League.
PSG ayaa gaadhay Finalka Champions League markii ugu horreeyey taariikhdeeda iyadoo 3-0 kaga soo adkaatay RB Leipzig wareeggii semi-inalka, waxaana goolasha usoo dhaliyey Marquinhos, Angel di Maria iyo Juan Bernat, laakiin finalka oo ay Axadda ciyaarayso ayuu imtixaankii ugu adkaa kaga horreeyaa, waana Bayern Munich oo 8-2 kusoo burburisay Barcelona.
Tan iyo intii kooxdan ay maalgelisay Qatar sannadkii 2011 oo ay mulkiyaddeeda la wareegtay, waxay PSG noqotay kooxda ugu awoodda badan Faransiiska iyadoo si xidhiidh ah ugu guuleysanaysay horyaalka Ligue 1 marka laga reebo sannad ay kasoo dhex gashay Monaco, laakiin waxay dhinaca kale wareegyada hore kaga hadhaysay tartanka Champions League.
Tababaraha Tottenham ee Jose Mourinho oo koobka Champions League u qaatay kooxaha FC Porto iyo Inter Milan, ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta DAZN, waxa lagu weydiiyey awoodda PSG iyo haddii ay ahayd inay waqti horeba ku guuleysato koobka, waxaanu ku jawaabay: “Waxay ila tahay inay fashil u tahay in aanay koobka ku guuleysanin laba sannadood ka hor, sababtoo ah, shan ama lix sannadood oo maalgelin ahi waa waalli, liiska ciyaartoyda sare ee kooxda joogana lama rumaysan karo.
“Imisa sababood, Thiago Silva ayaa halkaa jooga, Marquinhos ayaa jooga, kaddibna wiilasha waaweyn, sida Iraba (Zlatan Ibrahimovic), Edinson Cavani, Neymar, Kylian Mbappe.”
Mourinho waxa uu tilmaamay in PSG ay ahayd koox aan dunida kale waxba ka ahayn, laakiin haddana haysata ciyaartooyo dunida kale ka yimid, waxaanu yidhi: “Dabcan, riyadooda iyo markii ugu horreysay ee ay xaaladda noocan ah yimaaddeen iyo ciyaarta noocan, ciyaartoydan ayaa caadiyan kusoo badanayay, xattaa haddii aanan ku fikirin in kooxdani aanay dunida kale waxba ka ahayn, ciyaartoydan ayaa dunida kale ka yimid.”